လက်လီ MBD8 ကွက်အရွယ်အစား ၈၀ / ၁၀၀-၃၂၅ / ၄၀၀ သတ္တုနှောင်ကြိုးစိန်အမှုန့်ကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် | SinoDiam
SND-G40 ကွက်အရွယ်အစား ၈၀ / ၁၀၀-၃၂၅ / ၄၀၀ သတ္တုနှောင်ကြိုးစိန်အမှုန့်ကြိတ်ခွဲခြင်း
SND-G40 ၏ 2. အက္ခရာ
Semi- blocky crystals နှင့်အတူစိန် angular ပုံစံများနှင့်မီတာedium မြင့်မားသောမာကျောမှု၊ ကောင်းသောမြင့်မားသောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်သင်၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလိုအပ်သော်လည်းအသုံးချသက်တမ်းတိုးစေမည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခဲတံကြိတ်ခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့ခြင်းဘီးများပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အလယ်အလတ်ရှိသောကုန်ကြမ်းများကိုဖန်တူးခြင်း၊ ခဲတံဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း၊
3. Fine Size ဒြပ်စိန်ရရှိနိုင်အရွယ်အစား
SND-G05 50 / 60-325 / 400 အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်နည်းပြီးခိုင်မာမှုနည်းသောပုံသဏ္shapeာန်ရှိသည်။ တကယ
SND-G10 30 / 35-325 / 400 အဝါရောင်အရောင်, စံခိုင်မာသောနှင့်အတူမမှန်ပုံသဏ္,ာန်, အတွက်အသုံးချ
SND-G15 30 / 35-325 / 400 အဝါရောင်အရောင်, မြင့်မားသောမာကြောခြင်းနှင့်ခိုင်မာခြင်း။ ကြွေထည်များတွင်အသုံးချ
SND820 20 / 25-70 / 80 ခိုင်မာမှုနည်းခြင်း၊ ပုံမှန်ပုံသဏ္,ာန်၊
ယေဘုယျအားဖြင့်စိန်ဓါးသို့မဟုတ် girnding ဘီးအောင်သည်
SND-840 20 / 25-70 / 80 ပြည့်စုံသော cubo-octahedron ပုံသဏ္,ာန်၊
SND860 20 / 25-70 / 80 အလတ်စားမှမြင့်မားသောမာကျောမှု၊ Blocky crystal ပုံသဏ္,ာန်၊
SND-870 30 / 35-70 / 80
တည်ငြိမ်မှု။ စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်မားသောလိုလားသောဓါးများ၊ core drill bits နှင့်စိန်များကိုပြုလုပ်သည်
MBD10 ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားစိန်အမှု ...